पहिलोपटक काठमाण्डौमा ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटीए – Everest Pati
काठमाण्डौं – नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप ३१६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो वृद्धिसँगै मङ्गलवार अपराह्णसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १३,५६४ पुगेको छ।
तीमध्ये ३,१९४ जना निको भएका छन् भने २९ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले आइसोलेशनमा भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०,३४१ छ। अहिलेसम्म प्रदेश नं ५ मा सर्वाधिक ३,८०७ जना र २ मा ३,७९४ जना कोभिड-१९ भएका व्यक्ति भेटिएका छन्।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। मङ्गलवार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२१ जना र प्रदेश नं २ मा ८२ जना थप सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। हालसम्म सात जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमण देखा परेको डा. गौतमले जानकारी दिए।
त्यस्तै मंगलबार काठमाडौं जिल्लामा १२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं जिल्लामा १२ जना स‌ंक्रमित भेटिएको पत्रकार सम्‍मेलनमा जानकारी दिए । काठमाडौं जिल्लामा ५ महिला र ७ जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो । यति धेरै संख्यामा काठमाण्डौमा संक्रमित भेटिएको पहिलोपटक हो ।
यस्तै ललितपुरमा एक पुरुष र भक्तपुरमा एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा ४,७११ वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट र २,१४२ जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। यससँगै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको सङ्ख्या २,२८,३४१ पुगेको छ।
विगत २४ घण्टामा विभिन्न जिल्लामा ६० जना निको भएर घर फर्किएका छन्। क्वारन्टीनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले देशभरि ५३,०७० व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्।
टिकटक स्टार सिया कक्कडको उनकै छिमेकी ले ज्यान लिएको खुलासा !
साउन महिनाको मध्यमा बाढी तथा पहिरोको धेरै खतरा
विश्वभर एकैदिन थपिए २ लाख ३० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले १५ घर बगायाे : १९ बेपत्ता, दुईको शव भेटियाे
काठमाडौंमा देखियो महामा’री बढ्ने संकेत, आज थपिए २८ जना सं’क्रमित